Imaam Masjid oo maanta lagu diley magaalada London ee caasimada UK – SBC
Imaam Masjid oo maanta lagu diley magaalada London ee caasimada UK
Imaam masjid oo lagu magacaabo Maimoun Zarzour oo 39 sano jir ah ayaa maanta lagu dhex diley masjid ku yaal waqooyiga magaalada London ee caasimada UK.
ALLAHA u naxariistee Maimoun Zarzour ayaa wuxuu Imaam ka ahaa masjidka Abu Hamza ee ku yaal xaafada Finsbury Park ee Waqooyiga magaalada London, waxaana masjidku uu ku dhex yaal xarun Islaami ah oo deegaankaasi ku taal.
Imaamka ayaa saaka salaadii subax masjidka dadka ku tujiyey hase yeeshee saaka barqadii xili la isku diyaarinayey salaada jimcaha waxaana meydkiisa laga helay xafiiska Masjidka isagoo dilkiisa loo adeegsadey ceego dhuunta laga qabtey.
Maamulka masjidka & taliska Booliiska ayaa sheegay in dilka Maimoun Zarzour aanu aheyn mid ku saleysan naceyb diimeed, hase yeeshee baaritaan ay Booliisku wadaan.
Dhinaca kale Booliisku waxay sheegeen in nin muslim ah uu isku soo dhiibay ciidamada Booliiska isagoo sheegay in uu isagu Imaamka dilay, ninkaasi oo ay hada gacanta ku hayaan Booliska baaritaan ayaa lagu hayaa.
Ninka dilka geystey ayaa la sheegay in uu saaka codsadey in uu Imaamka arko isagoo balan ka qabsadey, waxaana la ogeyn sababta dilka ka dambeysa.
Imaamkii hore ee masjidka Mohamad Kozbar ayaa isagoo ka naxsan dilka Imaamka wuxuu sheegay in uu tacsi u dirayo qoyskiisa, wuxuuna ku tilmaamay Imaam Zarzour nin aad u naxariis badnaa oo ahaa miskiin ALLIHIIS yaqaan, wuxuuna yiri “In loo dilo habkaasi waa mid dambi ah, waana in qofka falkan geystey cadaalada la horkeenaa”.
Abdul Abdi oo ah maareeyaha hay’ada maamusha masjidka ayaa sheegay in Imaamku uu ahaa nin aad iyo aad u dulqaad badnaa oo bulshada caawin jirey, isla markaana waqtigiisa in ka badan uu masjidka siin jirey, wuxuu kaloo sheegay in uu la kulmi jirey qof kasta oo u baahan ha la balansanaado ama yaanu balan la laheyne.
Imaaam Imaam Zarzour ayaa ahaa nin indhoole ah oo aan waxba arkin, waxaana dilkiisa aad uga xumaadey dadka degan xaafada Finsbury Park & guud ahaan waqooyiga magaalada London.